Safarkaygii Deegamada Galbeedka Boorama | Abdulahi - Wisdom & Murti
Abdulahi – Wisdom & Murti
"Wixii La Qoraa Quruuma Hadhee .. Hadal Muxuu Qiimo Leeyahaya" Abdisinmoo.
what history make me
Tacsi: Maantana gaariyaa baxay
Experience: What Does It Offer Me?
Safarkaygii Deegamada Galbeedka Boorama
Nimaan dhul arag dhaayo malahan.. safarkiii deegamada galbeeedka magaalda Boorama
Maanta waxa ay ahayd maalin aad u farxad badan, waxa uu aha waxaa i farxada galiyaya, Qiso Hoos ku xusan.
Waqtigu markuu aha 7:00 aroornimo aya waxa aan ka soo baxay Guragii/aqalkayagii aan ka daganaa magaalda boorama, aniga oo u jehaysan goob aan ku balansanayna akhyaartaydii ama saxibaday, muhiimada na kulmisayna ay ahayd anaga oo ahayn sxb wadaaga dhamaan maraaxisha nololeed, kubadana inta badan wada ciyaari jirnay kuna ciyari jirnay magaca Spain, goobta aan ku kulmaynay waxa ay ahayd guri ka mida guryaha saaxiibkayo, Oo magaciisa la dhaho Aadan Siyaad Cismaan . goobtaasi waxa aan iskugu nimidnay si uuna safarku dib nooga dhicin in aan markaliya ka wada baxno, lkn waxa naga habsaamay gaadhigii aan safarka ku maraynay, xidhiidh aan la samayn ka dib waxa uu noo shegay in ay hawli qabsatay markaasi aan ugu nimaadno meesha u joog.
markaan waxooga jidka soconay aya waxa naga hor imiday gaadhigii aan u soconay, dhamaantayo waanu faraxnay waxaana hada si rasmiya u bilaabmay safarkayagii ama dalxiiskii. inyar ka dib safarka oo dheeraa awgeed masjid Taqwa agteeda ayanu isku habayn, waxa ay saacadu markasi ahayd 8:30 arornimo, waxa anu u dhaqaaqayn suuqa si hawliha dhiman aanu uga soo dhamaystirano gaadhigana shidaalka loo soo dhamaystiro maadaama aan u socono deegaan u badan tuulooyin iyo dagmooyin ay ku yartahya in laga helo shidaal. markuu waqtigu ku beegnaa 10:30 aroornimo aya toos uga baxnay magaalda Boorama, dabcan markaad magaalada Boorama galbeed uga baxdid waxa ad si toosa u arki karaysaa dhamaan xaafadaha ku yaala galbeedka magaalada oo qayb ka mid ah ay saaranthaya Buur. waxoogaa markaan sii soconay ee aan magaalda ka dheeraanay waxa bilaabmay Tuulooyin iyo tuulooyin dhamaantood watay astaamo kala duwan.
abaare 10:40 aroornimo aya waxa aan gaadhnay tuulada la dhaho Sh.Huways, kumaanu nasane hore ayanu ka dhaafnay waxa iyana ku sii xigtay magaalda Jirjir, o an iyadana cagta dhignay 11:11 aroornimo, magaalda jirjir waa degan kooban misana leh dhamaan kaabayasha ay bulshadu u baahantay oo ay ka mid yihiin: waxbarashada, oo dugisga magaaldu ay leedahy ku yaalo Meel bura ah. waxa sidoo kale ay deegaankaasi leeyahy dhulbeereed iyo goobo ganacsi oo yar yar. waxyar ka dib waxa aan sii amba qaadnay socodkaygii anga oo iskugu jirnay in hore dawga am meesha u aragtay iyo in ay maant kaw ay u tahya. marba marka ka danbaysa waxa si kordhayay xiisaha aan u hayno gobta an sida rasmiga ah ugu socony waxana laga daalcanaya indhayaga farxad . waxa ay indhayagu qabteen waxyar uun ka dib ka soo bixitaanki aan ka soo baxay magaalada Jirjir. Buur dheer oo baro cad cadi ku yaalaan, waanu ku sii dhawanaay waxa ay noqotay Degmada Quljeed..
Degmada QUljeed waa deegan ka duwan Degankii an hore u soo aragnay ee Jirjir. Degmada Quljeed waxa ku yaala mid ka mida dugsiyada sae e gobolka. beero aad u balbalaadhan iyo dabcan guryo bilicsan oo haybtoodu ku yaryihiiin deegaamada sidan oo kale ah. waqtiga aanu gadhnay goobtasi waxa ay ahayd 11:30 aroornimo. waxaanu deegaankaasi dhaxdeeda ku nasanay waqti gaaban iskuna waydiin su’aalo u badnaa saqafad. uuna soo diyaariyay walalkay/ Ahmed Mohamed Barkhad.
Wax yara ka dib waxa aanu ka sii jarmaadnay deegaankaasi anaga oo ay wali sarayso farxada aanu u hayno deegaankii aanu u soconay. muuqaal farxadeed aya dhamantayo naga muuqday, markaliya ayay wax kastiba gadoomeen markaanu inyar dhaafnay deegaankaasi, waxa jabay oo taangiga saliida ka dilaacay/jabay gaadhigii anu saarnay. goobtuna waxa ay ahayd meel u dhaxaysay magaalad quljeed iyo magaalda aan u soconay, waqtiguna ku beegna 12:30 Arornimo, waanu wada dhaadhacnay markasi oo ay tiradayadu dhamay 16qof qaar aya iyagu markiiba dhaqaaqay qaar, qaarkalan waxa ay dhaqaaqeen waxoogaa ka dib waxa aan anigu ka mid aha kuwa labaad ee dhaqaaqay, gaadhiga inta la hagaajinayo maanu sugi karayn oo waxa aan u niyad kacsanayn deegaanka aan u socono. markaanu waxoogaa safar luga soconay ayaanu waxaan aragnay Bir dheer waxa markaliya niyadayda ku so dhacaday inay meeshu dawaatay, waxaanu magaaldii an u soconay soo gaadhnay steptiidee abaare 12:55 aroornimo.
waqtigaasi ayaanu si rasmiya u gaadhan ay magaaladan u soconay magaceeda la dhaho Boon. abaare 11:30 duhurnimo. safar dheer ka dib waxa aanu dagnay Dugsi ku yaalad magaalda, nasasho gaaban ka dib waxa uu qofkastiba guuda galay in uu maydho, 2:00 duhurnimo waxaanu u ambabaxnay meel suuqa oo ay ku taalay maqaaxi wax laga cuno.
waxanu ku soo labanay goobtii aanu ka dagnay degmada ee ahyad iskuulka, dhalinyarad qaar ka mid aha aya isku dayay inay seexdaan lkn hurda aya u iman waydy waanan so wada jednay. waxaanu sidoo kale tukanay saladii duhur iyo casar oo qasri ah. 4:30 galabnimo ayanu u dhaadhanay garoon si aan ula soo ciyaarno xulka Boon.
waxaanu degmada Boon koonfura bari uga baxnay meel aan ku qiyaasay 1Km, halkasi oo uu ku yaalo Garonka dagmadu, waxanu bilownay ciyaartii, waxa daawanaya dadwayne aad u tiro badaciyarta o aad u xamasad badnayd waxa ay ku dhamatay 2:2, natiijadaasi ka soo baxday ciyaarta aad ayaanu ugu faraxnay maanu filayn marnaba, waxa ay ahaayeen dhainyarada an isla ciyaaraynay rag aan u badinaynay ina ay naga khibrada badanyihiin, waxan ku soo laabanay hoygii aan ka dagnaayn magaalda abaare saadii cishaaiyi, salaadii ayanu tukanay waanan maydhmaydhanay wax yar ka dib waxa aanu u soo baxnay suuqa.
Magaalda Boon waa magaalo ku taal dhul buureed deegaan sare ah waa deegaan ku yaal meeku suntan jawi wanaag iyo neecaw wanagsan gaar aha waqtiyada xagaaga. degmadan Boon waxa ay caan ku tahya hilibka Solayga ( waa hilib la dubay oo aad u macana ). sidoo kale deegankani waxa u leeyahay maqaaxiyo ad u fara badan oo waxa daga ama ku nasta waxna ka cuna dadka iskaga kala gooshaya deegana waqooyiga iyo jabouti ee safarka xalka dhulka ah. waxa ay suuq u tahay deegaama fara badan oo ku hareeraysan degmada. waxa sido kale ku yaala Iiskuulo waawayn, xarumaha dawlada, xaruma ganacsi oo waxa ka taagan biro dhaadheer oo shirkada isgaadhsiintu leeyihiiin.
Habenki markii aan suuqa u soo baxnay waxan ka yaabnay waxa ka mid ahaa in xaafadii aad gashaba aadan qof-na ugu tagayn, hooyadu suqa ayay aaday, aboouhu sidoo kale ciyaalkuna kama liito. waqtigu marki uu aha 11:00 habeenimo. Run ahantii waa rin fikirkiisa leh, ka dib waxaanu ku soo laabanay madashadii aan huro uga amba baxnay sidii loo sheekaysanayay aya waxa ay nagu gaadhay abaare 2:00 habeenimo. waxa hurdadii lag kacay 6:00 aroornimo. qar tukaday iyo qar kaleba waxa iyana aroortii mushkilo kale noqotya in uu gadhigiin naga maqnaa oo aaha baskii aan ka soo raacnay Boorama ee dhaxda nagaga jabay waxa nasiib wanaag meesha soo mara sidii hore aan u soo sheegnay gaadhiyaasha jabouti ka imaada oo daban aroortana ku soo beegma Deegaankasi waxanu isku qaybinaya gaadhiyaashii waxaana nasiib wanaag dhamantayo boosas ka helnay gadhiyaashaasi boorama ayanu ku sooo noqonaya 7:00 Aroornimo.
“Nin aan dhul arag dhaayo male” waxa ya ka mid ahayd safaradii iigu xasuusta badna ee aan baxo, waxa u aha mid waayo aragnimo leh . guud ahan waxa uu sidoo kale haa mid farxad iyo rayrayn badani ku jirto, waxa iga xasuusa in uu dalxiisku ka mid yahay waxyaalaha qofka maskaxdiisa koriya, isla markaasina waxa iyana muhiiim ah in aan dhulka kala barana ilaahya subxaanahuuu wataacaalana dhulalka noocyada farahabadan ee uu abuurayna aan uu fiirfirsana kana faa’idaysano tusaalayawga bdan ee ku jira. dhamaad
waa safarkaygii galabeedka boorama 29-07-2010 khamiis- ilaa 30-07-2010
may last voyage
Sheeko Gaaban “Waa la dhaqaa Nooh!!!!”